कब्रस्तान | samakalinsahitya.com
- गोपाल विरही
आज खैरे पनि अचानक विरामी प¥यो । बिहानदेखि अहिले भर्खरसम्म त ऊ राम्रै वा स्वस्थजस्तो नै देखिएको थियो । तर, यताबाट उता र उताबाट यता उठबस गरिरहेको छ अहिले ऊ । उसले आफू पनि सेतेजस्तै रोगबाट ग्रस्त रहेको सङ्केत दिइरहेको छ । सेते अर्थात् उसको भाइ पनि क्षणभरमै हृष्टपुष्ट र स्वस्थ थियो । तर, क्षणभरमै उसले हामीलाई छाडेर गएको पनि हो । हिजोमात्रै सेते परलोक हुनु र, फेरि आज खैरे छट्पटाउन थाल्नुले हामीलाई अवाक् तुल्यायो । खैरेलाई झट्पट् अस्पताल लानुपर्छ भन्ने कुरा मैले र बहिनीले उठायौ“ । बुबाले ‘केही क्षण विचार गरौ“’ भनिरहनुभएको र, नशालु झारपात खाएको हुन सक्ने आशङ्का गरी परम्परागत मान्यतानुसार चूक (अमिलो) पनि खुवाइदिनु भएकाले हामीले केही बेर पख्र्यौ“ । तर खैरेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । ऊ झन् उफ्री–उफ्री छट्पटाउन थाल्यो । अब त हाम्रो धैर्यको बा“ध टुटिसकेको थियो । हामी सेतेको मृत्युबाट यति भयभित भइसकेका थियौ“ कि खैरेलाई पनि कतै त्यस्तै हुने त होइन भन्ने त्रासले हाम्रो मनमा बादल लाग्न थाल्यो । अस्पताल लैजाने कुरामा हामी सबै सहमत भयौ“ । तर कहा“ हो अस्पताल ? मलाई केही थाहा थिएन । बुबाले यसभन्दा अगाडि खैरे, सेते वा मुनीकै आमाहरुलाई पनि ज“चाउनका लागि अस्पताल पु¥याइसक्नुभएकाले समस्याको हल उत्तिखेरै निस्कियो । मैले साइकल कुदाइहाले“ । बुबा खैरेलाई समातेर साइकलको पछाडि बस्नुभयो । केही सोच्ने फुर्सद् कसलाई थियो र ! मलाई कतै बाटैमा साइकलको पाङ्ग्रा फुटिहाल्ने पो हो कि ! अथवा चेन नै फुत्किने हो कि ! भन्ने भयले समातिरहेको थियो । हुन पनि त्यो साइकलले एक–एक थोक बिग्रेर हैरान पारिसकेको थियो मलाई । मनमनै कुनै सङ्कटले हाम्रो मार्ग अवरुद्ध नगरोस् भन्ने प्रार्थना गर्न थाले“ । खैरे कराइरहेको थियो । हामी कुद्दै गयौ“, खैरेको मे“–मे“स“गै हाम्रो साइकलले गति लियो ।
‘के भएको हो त्यस्तो खैरेलाई !’–मैले जा“दा–जा“दै सोचेछु । हुन पनि अचानक टोलाउन थालेको थियो खैरे । सधै“ ‘खैरे !’ भनेर बोलाउने बित्तिकै खुर्र दगुरेर छेऊमै आइपुग्ने ऊ आज किन जहा“को त्यही“ छ ? किन खैरेले अटेरी गरिरहेको छ ? उसले पनि सेतेले जस्तै सबैस“ग सधै“का लागि अटेरी गर्न खोजेको त होइन ? अह“! खैरेलाई केही हुन सक्दैन ! खेरे हामीलाई छाडेर जान सक्तैन !
खैरेकी आमा पनि आज ऊप्रति केही बढी प्रेमभाव दर्साइरहेकी थिई । आफ्नो एउटा जवान छोराको अनुपस्थितिको शोकले रन्थनिएकी खैरेकी आमालाई खैरेको त्यो दयनीय अवस्था देखेर कस्तो लाग्यो होला ? यो प्रश्नको उत्तर ऊ आफैले पनि दिन सक्दिन । तर खैरेलाई चाटिरहेकी मुनीलाई देखेर सबैले यो कुरालाई महसुस गरेको हुनुपथ्र्यो कि वास्तवमा पशुहरु अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरुको हृदय यति सुकोमल हुन्छ कि उनीहरु आफूलाई कसले माया गरेको छ र, कसले घृणा गरेको छ भन्ने कुरा सजिलै छुट्याउन सक्दछन् । त्यसैले त हाम्रो प्यारो सेते हाम्रै घर पल्तिरको एउटा मोटे मान्छेस“ग सधै“ तर्केर हि“ड्थ्यो । कुरा के थियो भने हाम्रो सेतेलाई देख्नासाथ त्यो मोटेले प्याट्ट–प्याट्ट हिर्काइरहन्थ्यो । कहिले मुखै थुनिदिन्थ्यो र, कहिले चारवटै खुट्टा च्याप्प पारेर राख्दथ्यो ।
अ“, हामी पशुहरुको औषधि पसलमा पुगुञ्जेल मलाई वर्षै बितिसकेजस्तो लाग्यो । सधै“ ओहोर–दोहोर गरिरहेकै त थिए“ नि त्यो बाटोमा । तर किन त्यही बाटो मेरा निम्ति कैयौ“ माइल दूरीको भयो ? यो पनि मेरो समझमा आएन । बाटोमा खैरे कराइरहेकाले मलाई अत्यास लागिरहेको थियो । कतिखेर आइपुग्ला त्यो अस्पताल भनेर सोच्दैमा म किंकर्तव्यविमूढ भइरहेको थिए“ ।
‘बुबा, अझै कति टाढा छ ?’ भनेर पचासपल्ट सोधेहु“ला मैले साइकल चलाउ“दै गर्दा । खैरेले ‘मे“–मे“’ गरिरहेकाले आ“खामा थोपाहरु चुहिन थालिसकेका थिए मेरा । ‘मलाई छिटो अस्पताल पु¥याओ, म जा“दैछु’ भनेर खैरेले भनेको हो कि भन्ने सम्झेर मेरो मुटु फुट्ला कि जस्तो भइसकेको थियो । म ‘हु“क्क’ गर्ने अवस्थामा पुगेको मात्रै के थिए“, औषधि पसल आइपुग्यो । ‘ऊ त्यो रुखको फेदैमा हो’–बुबाले भन्नुभएपछि मेरो मन केही शान्त भयो । तर धैर्यको बा“ध टुटिरहेकै थियो । झटाझट् साइकल रोकेर खैरेलाई समात्न पुगे“ म । औषधि पसलमा गएर सोध्यौ“ । डाक्टर त्यहा“ नभएको र अझ केही पर पुग्नुपर्ने कुरा बताए औषधि विक्रेताले । म रुन मात्रै सकिन“, खैरे कराइरह्यो, झन् जोड–जोडले कराउन थाल्यो । लौ न नि १ के बित्यास प¥यो १ भन्ने सोचेर खैरेलाई छिटोभन्दा छिटो डाक्टरकहा“ पु¥याउन नसकिएकोमा पछुताउन थाले“ म । बुबाले खेरैलाई समात्नु भो र, मैले कुदाइहाले“ साइकल । जस्तोसुकै दुर्घटना किन नहोस् १ मैले साइकल बेस्सरी कुदाए“ । खैरे जोडस“ग कराएको सुन्दा मुटु ढुक्ढुक् गथ्र्यो ।
केही बेरमै डाक्टरकहा“ पुगिएछ । डाक्टरले यसो हेरेर औषधि र इन्जेक्सन दिए । त्यतिबेला मलाई त्यो डाक्टर देवताजस्तै लाग्यो । डाक्टरका अनुहारभरि टाटै–टाटा थिए । तर त्यतिबेला त्यसैमा मैले ईश्वर देखे“ । उसको पूजा नै गरे पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई । डाक्टरलाई धन्यवाद दिनका लागि मस“ग शब्द त थिएन नै १ साथै हर्षले मेरो मुखबाट केही निस्कन सकेन । इन्जेक्सन लगाउ“दा खैरे कराएको थियो र, एकपटक डाक्टरलाई पुलुक्क हेरेको थियो । सायद ‘मलाई के गरेको !’ भनेर सोधिरहेको थियो । डाक्टरले त्यति मायालु आ“खाले नहेरे पनि इन्जेक्सन लगाइदिएर ऊमाथि ठूलो उपकार गरिरहेका थिए । त्यस क्षणमा त्यही डाक्टरकै अभावले गर्दा त हाम्रो सेतेले प्राण त्यागेको थियो । आज खैरेले पनि डाक्टर देख्न नपाएको भए के हुने थियो ! म सोच्नै सक्तिन“ ।
हामीमाथि औषधि विक्रेताले ठूलो गुन लगायो । ऊ पनि डाक्टरपछिको प्राणदाता बनेर निस्कियो खैरेका निम्ति । हामीस“ग पैसा थिएन । औषधि खैरेलाई खुवाइदिइहाल्नुपर्ने ! हस्याङ्फस्याङ् गरेर औषधि पसलमा पुगेको थिए“ म । ‘केही बेरपछि ल्याइदिउ“ला पैसा, हुन्न ?’ भनेर सोधे“ मैले । नबोलिकन औषधि दियो उसले । कहा“ पाइन्छ अचेल त्यस्तो मान्छे ! पैसामा बिक्न खोज्छन् सारा ! तर, बिकेन ऊ । पैसामा खरिद्न नसकिने केही अल्पसङ्ख्यक मान्छेहरुमध्ये गणना गरे“ मैले उसलाई । न चिनेको, न जानेको, हाम्रो खैरेको औषधि सुटुक्क दिइहाल्यो उसले । धन्य हो उसको भावना !
खैरेलाई लिएर घर फर्क“दा मलाई के अनुभूति भयो भने म कुनै ठूलो काम गरेर फर्किरहेको छु । खैरेलाई डाक्टरकहा“ पु¥याउन सकेकोमा मेरो मनमा यति खुशी थियो कि, म व्यक्त गर्न सक्तिन“ । तर सेतेलाई सम्झेर मेरो मनमा पश्चाताप पनि भइरहेकै थियो, सेतेले डाक्टर देख्न पाएन ।
खैरेलाई उपचार गराएर फर्क“दा बाटामा मान्छेहरु कसैले टोलाएर हेरिरहे, कोही गलल्ल हा“से भने कसैका अनुहारमा आश्चर्य पनि मैले भेटे“ । जे होस्, खैरेलाई अस्पताल पु¥याउन सकिएको खुशीमा मैले साइकल बेस्सरी कुदाएछु । खैरे घरसम्म आरामले आइपुग्यो । तर घर आएपछि खैरे कराउन थाल्यो । फेरि एकपल्ट अत्यासले घरमा सबैको अनुहार बादलिन थालिहाल्यो । उसकी आमाले खैरेलाई मुसार्न थाली । धामी–झा“क्रीको व्यवस्था पनि उत्तिखेरै भयो । आफूले ‘रुढीवादी परम्परा’ भनेर झारफूकको विरोध गर्दै आएको भए पनि खैरेलाई त्यसले केही असर गरिहाल्छ कि भन्ने आशामा म अल्झिइरहे“ । झ“क्रीले ‘फू–फू’ गरेर कुन्नि के–के ग¥यो र खरानी–पानी खुवाइदियो खैरेलाई । अलि आराम मिलेजस्तो ग¥यो खैरेले । मैले यो बुझ्न सकिन“ कि खैरेलाई डाक्टरको औषधिले आराम दिलायो वा झा“क्रीको खरानी–पानीले । जे होस्, खैरे कराउन छाडेपछि हामीले चैनको सास फे¥यौ“ । यसरी घरमा ल्याइसकेपछि पनि एकछिनसम्म त हामी सबैलाई अत्याइरह्यो खैरेले । सायद अब ऊ स्वस्थ छ । भोलि बिहानै उठेर चर्न जानेछ ।
सेतेले यो संसार छाडेर गएको कति दिन भयो भन्ने कुराको गणितीय गणना मैले गरेको छैन । आजसम्म मैले उसलाई कहिले आफ्नी प्रेमिकाको रुपमा त कहिले भाइको रुपमा अनि कहिले साथीको रुपमा त कहिले क्षणभरको एउटा सहयात्रीको रुपमा कैयौ“ पल्ट कल्पना गरिसके“ । जीवनका अठार वसन्तहरु पार गर्दा केवल दुई पल्ट मैले प्रेमको अनुभूति गरेको छु । एउटा स्कूले जीवनमा र, अर्को सेतेको देहान्तपछि । मेरो स्कूले जीवनमा एकपल्ट यस्तो मोड आएको थियो, न त भोक लाग्थ्यो न त तिर्खा । कसैस“ग बोल्न मन नलाग्ने अनि एकान्तमा कुन्नि कहा“–कहा“ पुगेको रमाइलो कल्पना गर्ने बानी सायद त्यतिबेलादेखि नै बसेको हो ममा । वास्तवमा त्यो प्रेम रहेछ भन्ने कुरा आज मलाई थाहा लाग्दैछ । प्रेम भनेको त्यस्तो हु“दो रहेछ भनेर मलाई सेतेको देहान्तले महसुस गराएको छ ।
अचेलभरि म घरको छानोमाथिबाट सेतेलाई गाडिएको उसको कब्रस्तान हेरिरहन मन पराउन थालेको छु । जिउ“दो हुञ्जेल त्यति ख्याल भएन । तर मरेपछिको सेतेको अभावलाई महसुस गर्न थालेको छु म । दसै“ आएको छ, सबै र¨ीच¨ी पहिरन लगाएर घर–घर लागिरहेछन्, रमाइलो गरिरहेछन् । तर सेतेको अभावले कसैलाई कुनै प्रभाव परेको मैले पाइन“ । सेते भएको भए दसै“ कत्ति रमाइलो हु“दो हो अथवा सेते नभएर यसपालिको दसै“मा कत्ति नमज्जा भएको हो भनेर कसैले महसुस गरेजस्तो पनि मलाई लागेन । यस्तो छ यहा“को परिवेश । लाग्छ, हिजो सेते थियो, हिजोका दसै“हरुमा अरु मान्छेहरुस“ग सेते पनि हुन्थ्यो, तर आज सेते छैन । सेते बाहेकका अरुहरु हिजोझै“ मस्त छन्, कुनै परिवर्तन छैन यहा“, बाहेक सेतेको अनुपस्थिति । घरमा सबैस“ग बसेर खाना खा“दा सेते, खैरे, मुनी सबैले हेरिरहेका हुन्थे ती दिनहरुमा । तर अचेल हामीले खाना खान लाग्दा सेतेले हेर्दैन, ऊ घटेको छ । अरुहरु सपासप गास निल्छन् । तर खैरे वा मुनीलाई मात्र देख्दा मलाई भने सेतेको सम्झना आइहाल्छ । सेते भएको भए ऊ पनि यही“ बसेर टुलुटुलु हेरिरहेको हुन्थ्यो जस्ता कुराहरु आउ“छन् मनमा र, म अलग्गै बस्न चाहन्छु सहन नसकेर । दश दिन जति त मैले खाना खानै सकिन“ । मलाई के कुराको विशेष चिन्ता रहन्छ भने मान्छेहरु स्वार्थको घिनलाग्दो, गन्हाउने र दुर्गन्धित पोखरीमा झन्–झन् पौडि“दै, डुब्दै र भासि“दै गइरहेछन् । सेते मरेको दिन पनि आधा घण्टा नबित्दै कसरी खान सकेका चिया र पाउरोटी कपाकप ? सेते नरहेको कुराको चिन्ता किन नरहेको उनीहरुमा ? कि सेतेको निधनमा खुशियाली मनाइरहेका थिए उनीहरु ?
अब म सेतेको कब्रस्तानतिर जा“दैछु । सेतेको यताउता हि“डिरहने, खोलाको किनारमा मस्त निदाउने त्यो शरीर सायद अहिले गलेर, सडेर धुलोपिठो भइसकेको हुनुपर्छ । सेते गाडिएको ठाउ“मा अहिले हरियै दुबो पलाएको छ । नजिकै दुईवटा सिसौका रुखहरु उभिएका छन् । लालुपातेका विरुवाहरु छेउछाउमा झ्या¨िएका छन् । करिब पचास मिटर जति अगाडि एउटा घर छ । सेते हामीबाट टाढा हुनुभन्दा यस्तै आठ÷दश दिन अगाडि मात्रै त्यो घरको एउटा बूढो मानिसले पनि यो धर्तीबाट विदा लिएको थियो । तर मलाई त्यो बूढो मानिसको निधनमा त्यति शोक छैन जति सेतेको । कारण, त्यो बूढोमा सेतेमा जस्तो कर्तव्यनिष्ठा मैले देखिन“ । नजिकै बजारमा पसल थापेर बस्थ्यो ऊ । एकदिन उसको पसलमा सामान लिन भनी गएको थिए“ । व्यर्थैमा मस“ग झगडा गरेको थियो त्यो बूढोले । त्यस दिनदेखि उसको पसलमा जानै बन्द गरिदिएको थिए“ मैले । यसरी जिउ“दैमा त्यो बूढो मेरो लागि प्यारो बन्न नसकेकोले, अथवा मलाई मन नपरेकोले, त्यो बूढोको मलाई सेतेको जत्तिको माया पटक्कै लाग्दैन । त्यही बूढोको घरदेखि पूर्वपट्टि एउटा खेल मैदान छ । मेरो सेतेको कब्रस्तानको परिवेश करिब–करिब यस्तै नै छ । अझ पश्चिम पवित्र नदी बहेकी, नदीपारि देवताको मन्दिर रहेको जस्ता कुराहरुले सेतेको भौतिक शरीर जहा“ छ, त्यसलाई थप सुन्दर तुल्याइदिएको छ । नगािके किनारमा बसेर पनि सेतेको कब्रस्तान हेर्न सकिन्छ । म प्रायः सन्ध्या र उषाकालमा त्यसै गर्छु । सेतेस“गका यादहरुमा रमाउने गर्छु, सेतेस“गै खेल्ने गर्छु ।
एकदिन मैले सेतेकी आमा (मुनी)को अनुहारमा नियालेर हेरे“ । ‘जीवन के हो’ भन्ने विषयमा उसले गम्भीर चिन्तन गरिरहेकी हो कि जस्तो भान हुन्थ्यो । उसको अनुहारमा झल्किएको गाम्भीर्यले उसलाई एउटा दार्शनिकजस्तो, एउटा मनोविश्लेषणकर्ताजस्तो, अथवा चिन्तकजस्तो बनाइदिएको थियो । सा“चै १ मुनीले सोचेकी थिई सायद कि जीवन दुई दिनको भेल हो । यो भेल कतिखेर उर्लेर कहा“ टु¨िन्छ कसैलाई थाहा छैन । आफूभन्दा पछि जन्मिएको सेतेले आफ्नो भेलजस्तो जीवनलाई आफ्नी आमाभन्दा पहिले नै टु¨ोमा–विश्रामस्थलमा पु¥याएको थियो । मुनीको अनुहारको भावले यो पनि स्पष्ट भनिरहेको थियो कि सेतेको लागि चाहेर हुने भए उसले बरु आफ्नै ज्यान दिने थिई । सेतेको अभावमा जुन पीडा उसले सहन गर्नु परिरहेछ, त्यो पीडा उसलाई सेतेको जीवनरक्षाका लागि प्राणोत्सर्ग गर्ने बखतमा पनि हुने थिएन । तर बिडम्बना, संसार त्यसरी चल्दैन । कसैले चाह“दैमा कसैको आत्माले शरीर नछाड्ने वा छाड्ने होइन । एउटाको साटो अर्कोले मरेर वा बा“चेर हुने भएको भए यो संसारमा सायद यति कोकोहोलो मच्चिने थिएन, यति रुवाबासी चल्ने थिएन । न त मुनीले सेतेको बदला मरेर हुने थियो न त मुनीको बदला सेतेले बा“च्न नै पाउनेछ । संसार आफ्नै नियममा हि“डिरहेछ । आफ्नै चलनमा कुदिरहेछ, दौडिरहेछ । यदि यस्तो हुन्थेन भने सेतेको लागि मै आफै“ पनि बलिदित हुन्थे“ । त्यसबेला सेतेको प्राणरक्षा गर्ने सौभाग्य पाएकोमा म आफूलाई भाग्यशाली ठान्थे“ । तर त्यो सौभाग्य मलाई विधाताले दिएको छैन, न त अरु कसैलाई नै । मेरो ठाउ“मा पनि कसैले त्यो सौभाग्य कहिल्यै पाउने छैन । यो शाश्वत् सत्य हो । समयको निष्ठुरीपन बुझ्नका लागि यिनै कुराहरु पर्याप्त छन् । न त समय कसैको बेदना, चित्कार र रुवाबासी सुन्छ, न त ऊ कसैको पुकार वा रोदनबाट नै पग्लन्छ । समयले के बूढो, के बालक, के गर्भे, कसैलाई छाड्दैन । त्यही समयको पासोमा परेको त हो मेरो सेते । बिचरो ! निरपराध, निष्कलङ्क, निःसहाय सेते ! ‘मे“–मे“’ गर्दा–गर्दै खुत्रुक्क भएको थियो । समयले उसमाथि अलिकति पनि दया गरेन । डाक्टरकहा“ पु¥याउने मौकासम्म पनि दिएन त्यो पापी समयले ।
प्रायःजसो खैरेलाई देख्यो कि सेतेको उपस्थितिको झल्को आइहाल्छ । खैरे नै सेतेको प्रतिविम्ब हो जस्तो लाग्छ । उही हावभाव, उही बसाइ, उही उठ्ने शैली । दाजु–भाइ उस्तै–उस्तै त थिए । आज भाइ छैन । तर उसको हावभावको दुरुस्त नक्कल हामी देखिरहेछौ“, उसको बस्ने–उठ्ने कलाको अनुकरण हामी हेरिरहेछौ“ । समग्रमा यसरी भनौ“, हामी खैरेलाई सेते मानेर बुझिरहेछौ“, सेतेको अर्को रुप भनेर हेरिरहेछौ“ । अझ भनौ“, कहिले प्रेमिका र कहिले क्षणिक सहयात्री बनेर मस“ग मेरो सेतेको आत्मा खेलिरहेको छ, सेतेको प्रतिविम्ब नाचिरहेको छ । सेतेको कब्रस्तान वरिपरि उसको सम्झना लुकेको छ र, त्यही सम्झनाले नै उसलाई आजसम्म मेरो निमित्त अजर–अमर तुल्याई राखेको छ ।
यस्तै कुराहरुमा भुलिरह“दा म यो कुरालाई भुसुक्कै बिर्सन्छु कि सेते हामीबीच छैन । मानौ“, सेते मस“गै जलविहार गर्न हि“डिरहेछ, उफ्रिरहेछ, दौडिरहेछ । मानौ“, मैले देख्ने हरेक दृश्यहरु सेतेकै प्रतिविम्ब हुन् ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : आईतबार,3पौष, 2068
मोदनाथ प्रश्रित : कवि–व्यक्तित्व एवम् कृतित्व एक विश्लेषण